Noocyada warqadda: maxay tahay warqadda iyo noocyada waraaqaha jira | Abuurista khadka tooska ah
Warqaddu maanta waxay ka mid tahay maalinteenna maanta. In kasta oo ay noqotay wax aan caadi ahayn, maxaa yeelay waxaan isku dayeynaa inaan u isticmaalno sida ugu yar ee suurtogalka ah, iyo maxaa yeelay waxaan in badan ku tiirsannahay tiknoolajiyadda, runtu waxay tahay, dhamaadka maalinta, hubaal inaad xiriir la yeelatay noocyo waraaqo ah . Tusaale ahaan, ajende, buug, qaansheegad, buug-yare ...
Xafiisyo badan, iyo waliba guryaha, waa shey muhiim ah. Laakiin waxa laga yaabaa inaadan ogeyn inay run ahaantii jiraan noocyo badan oo waraaqo ah. Xaqiiqdii, waan tirin karnaa 16 waxaanan hubnaa inaan ka tagi doono dhawr kale. Laakiin waa maxay noocyada jira? Dhammaantood waa isku mid? Tan iyo inbadan oo ka mid ah waa waxa aan dooneyno inaan maanta kaala hadalno.
2 Waa maxay astaamaha uu warqaddu leeyahay
3 Noocyada warqadda
3.1 Repro, dheellitir ama warqad daabacan
3.2 Satin ama warqad dhalaalaya
3.3 Warqad koollo
3.4 Warqad dahaadhan ama dahaadhan
3.5 Khudaar ama warqad aan kaarboon lahayn
3.6 Warqad farshaxan ah
3.10 Noocyada waraaqaha: Waraaqda dib loo warshadeeyay
3.11 Noocyada waraaqaha: Xaashida cilmiga deegaanka ama noolaha
3.12 Noocyada Waraaqaha: Warqadda Curaarta
3.13 Noocyada Waraaqaha: Xaashida Cadka
3.14 Noocyada waraaqaha: Wargeys
Waraaqda waxaa lagu qeexi karaa in ay tahay shey lagu gartaa inuu yahay xaashi khafiif ah oo ka kooban mid ka mid ah fiilooyinka khudradda, ama walxaha dhulka lagu qaso ee biyaha, iyo sidoo kale qalalan oo qallafsan. Isticmaalkeedu asal ahaan waa wax qoris, sawir, duub, iwm.
Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn in asalka warqadda uu ka yimid Shiinaha. Si tan loo sameeyo, waa inaad dib ugu noqotaa qarnigii labaad, halkaas oo, xariir, caws bariis, cudbi ... ay ku guuleysteen inay qaabeeyaan noocyada ugu horreeya ee warqadda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira taariikhyahano kale oo ka soo jeeda Masaarida tan iyo markii ay sameeyeen papyrus, iyada oo loo marayo jiritaanka dhirta ka soo baxday Webiga Niil.
Runtii ma ogin cidda soo aliftay hubaal, laakiin waxaan ognahay inay labadaas dal ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee adeegsada.
Waa maxay astaamaha uu warqaddu leeyahay
Hadda oo aad wax yar ka ogaatid warqadda, waa inaad ogaataa waxa astaamaha lagu yaqaanno si loo fahmo sababta ay u jiraan noocyo waraaqo ah. Waana taas, isbeddelada astaamahani waa kuwa qeexaya in loo tixgeliyo nooc ama nooc kale.
Marka, guryaha doorku leeyahay waxay ku saleysan yihiin waxyaabaha soo socda:
Naxwaha. Waa inaad u fahamtaa inay tahay gudbinta kaalintaas. Waxa caadiga ah waa inaad had iyo jeer isticmaasho warqad ka kooban 80 grammage Kuwa 90 ama 100 waxaa loo isticmaalaa in lagu daabaco dukumiintiyo muhiim ah oo leh muuqaal qurux badan, sida koorsooyinka koorsada, manhajka ...
Dhumucda warqadda. Waxaa loola jeedaa ballaca u dhexeeya labada weji, taas oo ah, haddii ay khafiif tahay ama dhumuc leedahay. Si aan fikrad kaa siino, warqad qaro weyn ayaa kufiicnaan karta rinjiyeynta dabeecadda maxaa yeelay waxaad ogtahay inaysan ka daadan doonin dhinaca kale ee warqadda ama wasakhda.
Mugga. Waxay loola jeedaa inta hawo ee warqaddu leedahay. Sababtoo ah haa, warqaddu waxay ka kooban tahay hawo iyo in badan oo ay leedahay, waa ay sii fududaanaysaa, laakiin sidoo kale waxay u muuqan doontaa chubbier.
Qallafsanaan. Waxyaabaha kale ee lagu garan karo warqadda waa cufnaanta, taas oo ah, haddii ay tahay mid hagaagsan ama sawir leh oo saameyn ku yeelan doonta habka wax loo qoro ama wax loo daabaco.
Mad-madow. Ugu dambeyntiina, waxaad leedahay mugdi, ama waxa isku mid ah, awoodda warqaddaas ay ku nuugi karto khadka. Markuu mugdi badan yahay, ayaa inbadan oo daabacaada ah ama waxaad warqadda kuqorto ayaa isbarbar dhigaya.
Adiga oo hada diirada saaraya noocyada warqadaha, waa inaad ogaataa in suuqa ay jiraan kuwa badan oo laga kala xusho, mid walbana loo isticmaali karo ujeedo ama ujeeddo kale. Sidaa darteed, waxaad ka heli kartaa waxyaabaha soo socda:
Repro, dheellitir ama warqad daabacan
Kani waa warqadda ugu fiican ee la yaqaan, kan aad ku heli karto gurigaaga ama xafiiska iyo waliba kan ugu badan ee la soo saaro. Caadi ahaan, waxay leeyihiin miisaan u dhexeeya 70 iyo 100 garaam, laakiin waxaa jira waqtiyo aad ka heli karto 100 iyo 120 garaam. Waxaa lagu gartaa in lagu sameeyo cellulose yar iyo sida ugu macquulsan ee cad.
Satin ama warqad dhalaalaya
Waxaa lagu gartaa inuu yahay warqad aad u dhalaalaysa. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u jilicsan taabashada iyo xitaa jaleecada hore waxay umuuqataa inay iftiimayso. Dabcan, astaamahan awgood way ka qaalisan tahay midka caadiga ah waxaana badanaa loo isticmaalaa in lagu daabaco sawirro tayo sare leh.
Sida magaceedaba ka muuqata, waxaa lagu gartaa inay tahay warqad hal dhinac leh oo u oggolaanaysa in lagu dhejiyo dusha sare. Sababtaas awgeed, warqaddan waxaa lagu daabici karaa oo keliya hal dhinac, maxaa yeelay dhinaca kale waxay leedahay filim xabag ah oo ka kooban xasaasiyad hufan iyo xoqooyin isku jira si looga fogaado wasakhda.
Warqad dahaadhan ama dahaadhan
Waxaa lagu yaqaan inbadan magaca hore waxaana lagu gartaa xaqiiqda ah in lagu soo saaray qadar badan oo ah fiber gaagaaban iyo fiber aan dheereyn. Intaa waxaa dheer, cellulose waxaa la siiyaa lakab daahan ah, sida haddii ay ahayd daahan, taasoo ka dhigaysa aragtida mid aad u wanaagsan oo qeexan.
Kani waa waraaqda badanaa loo isticmaalo buug-yaraha, buugaagta, ama joornaalada.
Khudaar ama warqad aan kaarboon lahayn
Waa warqad aad u khafiif ah, oo si fudud loo jabin karo, maxaa yeelay culeyskiisu inta badan kama badna 55 garaam. Ujeeddada warqaddan ayaa ah in "wax kale" la guuriyo. Taasi waa sababta badanaa loo adeegsado iyadoo la hoos dhigayo hal warqad iyo mid kale dusheeda si loogu gudbiyo gudbiyaha waxa ku qoran, lagu sawiray ama lagu daabacay hal dhinac (si ay dhowr jeer uga soo baxdo).
Warqad farshaxan ah
Waraaqaha noocan ah waxaa loogu talagalay farshaxanka carruurta maadaama lagu samayn karo dardarro kala duwan, midabbo, qaabab, iwm.
Kartoonka, iyo sidoo kale kan xiga ee aan arki doonno, sidoo kale waa warqad. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu gartaa inay ka sii dhumuc weyn tahay, ka sii adag tahay kana mug badan tahay tan ugu fiican ee la yaqaan (warqadda canugga). Xaaladdan oo kale, waa midda loo isticmaalo soo saarista walxo kale oo u baahan adkeyn weyn.
Kartoonku ma joojinayo inuu ahaado warqad, kaliya wuxuu kaga duwan yahay dhumucdiisa iyo sharaxaadda la bixinayo. Waana middaas in la abuuro, halkii laga daadin lahaa, waxa la qabtay ayaa ah baastada ceeriin.
Kartoon kasta wuxuu ka kooban yahay saddex lakab oo warqad ah. Inta udhaxeysa laba, lakabkaas seddexaad wuxuu leeyahay mowjad dabacsan, taas oo ah waxa u ogolaanaya adkaanta sanduuqa in la helo.
Waraaqaha noocan ahi waa dhexdhexaad u dhexeeya kaararka iyo kartoonnada. Waxaa si fiican loogu yaqaan inay tahay maadada lagu sameeyo sanduuqyada cuntada badankood, sida buskudka, badarka, kareemada, iwm. Way ka daciifsan tahay kartoonka, laakiin uma badna sida kartoonada, waxaad heleysaa warqad lagu sameeyay fiilooyin aad u gaaban oo ka dhigaya inay gudaha ku yeeshaan midab cawlan ama bunni ah.
Noocyada waraaqaha: Waraaqda dib loo warshadeeyay
Waraaqda dib loo warshadeeyay waxaa laga sameeyaa warqadda qashinka, sidaa darteed waxay leedahay dhammaad wanaagsan laakiin ma ahan sida cusub. Si kastaba ha noqotee, waraaqda noocan ah waxay ka caawineysaa daryeelka deegaanka maxaa yeelay, marka laga reebo midabka, oo badanaa jilicsan, cad wasakh ah iyo iska caabin hoose, waxaa loo isticmaali karaa si la mid ah sida warqadda canugga.
Noocyada waraaqaha: Xaashida cilmiga deegaanka ama noolaha
Si la mid ah dib-u-warshadaynta, iyagu isku nooc ma aha waraaqaha, maxaa yeelay kani wuu kaga duwan yahay kan kale. Kuwee Hagaag, taas oo warqadani ka timi jarista geedaha, laakiin waxaa la isku dayay in, haddii mid la jaro, mid kale lagu dhiraandhiriyo, habkaas oo ay tahay arrin sii wadista arrinta iyada oo aan wax khasaaro ahi ka soo gaadhin.
Noocyada Waraaqaha: Warqadda Curaarta
Waxaan ahay Bond, Warqad Bond ... Maxay taasi adiga kuugu eg tahay? Hagaag, waxbadan haku lumin maxaa yeelay taasi kuma xirna taas. Waa warqad nooc xaraf leh oo culeyskeedu u dhexeyn karo 60 illaa 130 garaam iyo, sidaan soo sheegnay, waxaa badanaa loo isticmaalaa warqadda waraaqaha, baqshadaha ama xitaa gudaha buugaagta qaarkood.
Noocyada Waraaqaha: Xaashida Cadka
Xaqiiqdii waxa ugu horeeya ee aad ka fakartay waa unugyo. Adigana ma lagaa dhumay. Xaqiiqdii, gogosha ama xaashida musqusha sidoo kale waxay ku habboon yihiin noocyada waraaqaha ah. Waxaa lagu gartaa jilicsanaan iyo u nuglaansho sarreeya (sababtoo ah u adkeysiga biyaha).
Noocyada waraaqaha: Wargeys
Waa midka loo adeegsado sameynta wargeys waxaana lagu sameeyaa waxyaabo ka yimaada qashinka waraaqaha dib loo rogay ama qashinka waraaqaha kale maadaama ujeedadu aysan aheyn inay xarrago noqoto. Tani waa sababta ay u janjeerto inay yeelato dhammaystirnaan iyo ur gaar ah. Xaqiiqdii, saacado yar ka dib, ama xitaa maalinta ku xigta, sii xumaashadeeda ayaa bilaabeysa in la ogaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Noocyada warqadda